Edison aluminium mwenje mubati chandelier Mugadziri, Fekitori, Wholesale - Zvigadzirwa - Dongguan Yisheng Electric Co, Ltd
Imba > Chandelier yekudyira > Aluminium yekudyira imba chandelier > Edison aluminium mwenje mubati chandelier
1ã Kana imwe modhi ichishandiswa yega, ndokumbira utarise kune saizi yemuviri wemwenje; ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa mukubatana, kana imwe chete modhi inogona kushandiswa yakazvimiririra.
2ã Chigadzirwa mwenje kupfura chaiko.
1ã € Natural yakasvibira huni mwenje chivharo, yakanaka kupisa kupisa.
2a € Yakagadzirwa nesimbi pendi siringi ndiro, yakasimba anti-ngura uye inorema-kutakura kugona.
3) .Mashoko ekubatanidza:
Maitiro ekusanganisa: Zvinoenderana nenzvimbo yekushandisa, sarudza raini refu yemapureti esiringi kana mahwendefa etenderedzwa, pane zvakapfuma musanganiswa, uye iwe unogona zvakare kuronga nekubatanidza wega.
Hot Tags: Edison aruminiyamu mwenje mubati chandelier Mugadziri, fekitori, Wholesale